Google Adsense Hada Lacageynta Cunteyda | Martech Zone
Monday, August 25, 2008 Isniin, Janaayo 7, 2013 Douglas Karr
In muddo ah ayaan ku orday xayeysiisyo suuq geyn ku ah quudintayda anigoo isticmaalaya Boostada plugin aan u soo saaray WordPress iyo Xubinta Guddiga xayaysiisyada. Runtii may ahayn il dakhli kasta oo muhiim ahi ka soo baxo, in kastoo, laga yaabee in laga yaabo dhawr doolar bishiiba.
Toddobaadkan, waxaan ka codsaday Google Adsense si aan ugu beddelo quudintayda Feedburner una beddelo Google. Habka loo sameeyo tan wali waa mid gacanta lagu hayo, laakiin ha ka baqin, ma waayi doontid hal macaamiil oo keliya inta hawshu socoto. Labada cinwaanba waxay sii wadaan inay daabacaan quudinta, laakiin gelinta quudinta Google waxay leedahay faa iidooyin lacageed maaddaama ay kaa siin doonto marin Google Adsense quudin.
Si fudud u soo gal koontadaada Adsense oo raac tilmaamaha si aad gacanta ugu soo gudbiso quudintaada si loogu beddelo. Waxay qaadatay qiyaastii hal usbuuc in taydu bedesho. Google wuxuu balan qaadayaa in tani ay noqon doonto nidaam otomaatig ah mustaqbalka.
Wali ma fiicna, in kastoo! Fiiri xayeysiiska kor ku xusan ee urur siyaasadeed xagjir ah oo la jaanqaadey qoraalkeyga ku saabsan Joe Biden. Maqaalka tixraaca ah wuxuu runtii ahaa muuqaal cabsi leh oo qurux badan taariikhda Biden ee 40 sano ee la codeynta walaalkiis weyn oo looga tagayo wiilka yar si uu u laalaado.
Ma filayo dakhli aad u badan oo ka soo gala shirkadda Adsense. Dad badan ayaa si fudud u wacaya barnaamijka Webmaster Daryeel caafimaad.
Tags: feedgoogle AdSensejaangooynta
WordPress iyo MySQL: Waa Maxay Eraygaagu Tiriyaa?
Agoosto 25, 2008 saacaddu markay ahayd 10:18 PM
Dhab ahaantii Douglas waxaan hayaa xayeysiiska RSS qiyaastii hal usbuuc hada maalmaha qaarna waxaan ka helayaa dakhli ka fiican halka aan ka helo blog-yada adSense. Ma hubo in taasi ay sii socon doonto waqti ka dib laakiin waa hubaal inay tahay wax aan jirin hadda.
Aug 26, 2008 at 7: 35 AM
Taasi waa wax weyn in la maqlo! Waxaan rajeynayaa inaan arko iyadoo la duulayo. Shalay waxay ahayd $ 0.01, hehe.
Aug 26, 2008 at 6: 43 AM
Waxaan ugu yeeraa daryeelka webmaster-ka maxaa yeelay waa “gacan-ka-hadal” asal ahaan mana ahan inay sameynayso lacag fiican - dib-u-eegisteennu waa 5 lambar bishiiba.